काभ्रेमा आफ्नै बाबुको ग र्भ बोकेर छो रीले जन्माइन छोरा ! – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /News/काभ्रेमा आफ्नै बाबुको ग र्भ बोकेर छो रीले जन्माइन छोरा !
‘उसलाई प्रहरीले थुनेपछि हामीले दे ह त्या ग गर्नु बाहेक अर्काे विकल्प छैन’–बालिकाको आमाले प्रहरीलाई बताईन । तत्काल प्रहरीले उनि सहित बच्चाहरुलाई ओरेक नेपाल मार्फत माईती नेपालको जिम्मा लगाएको छ । बालिकाको आमाको पिसिआर परिक्षण पछि मात्रै पठाईने जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका प्रवक्ता डिएस्पी कुमार विक्रम थापाले बताउनु भयो । file photo
जापानमा रोजगारी खुलेको विषयमा सचेत रहन सरकारको आग्रह